Wonke umuntu uthanda zopholi. Kodwa kukhona labo uthanda zopholi esikhulu kakhulu. Yiqiniso, nabo ukuze ujabule, kumnandi ukubona fast kanjani they bhibha endlini, kodwa kukhona izinto ezimbalwa odinga ukukwazi ngaphambi kokuthenga inyoni enkulu njengoba isilwane.
Mhlawumbe amaqiniso abaluleke kakhulu futhi kancane-eyaziwa ngalezi zinyoni, okuyinto abhekwa ehlakaniphile kakhulu, wukuthi uma ungenawo unake ngenxa futhi ivuselele ukuthuthukiswa abo engqondo, Bonke ngizithola kalula. Ukungabikho zalezi zinyoni enkulu nokuxhumana nabanye kungaholela ezinkingeni nge ukuziphatha ngisho zokugula emzimbeni.
Kubaluleke kakhulu ukuba abanikazi izinyoni ezinkulu waqaphela ukuthi isilwane esinjalo kufanele bazizwe ingxenye iphakethe. Ngaphandle ezingeni lelisetulu nokuxhumana nabanye, futhi ngaphandle ukunakwa efanele, ngaphandle imidlalo ngaphandle emangqamuzaneni izinyoni ezinkulu kuyoba nzima kakhulu ukuphila besekuthunjweni.
Nokho, labo bantu abangakwazi banakekele pet kahle, upholi ezinkulu kungaba ukunikela yokukhulumisana engenakulinganiswa futhi sikhangise amakhono abo esiyingqayizivele.
Blue and yellow ara
Lona fomu liyabonakala kakhulu zopholi. Babekujabulela futhi bayaqhubeka bejabulela ithandwa enkulu kokubili ezifuywayo iminyaka eminingi. Ziyakwazi ohlakaniphile kakhulu futhi ngokuvamile ukubukela kahle zonke namasu yakho, kanye izinyoni ukuphinda wonke amazwi akho, ngoba yileyo ndlela lapho zifunda ukukhuluma.
Lezi zopholi eqinile izimfanelo siqu, futhi abanikazi lezi zinyoni bajabule kakhulu, kodwa ngesikhathi esifanayo, kufanele babe nolwazi, owayeyazi kahle ukuziphatha umngane wakhe enezimpiko. Zilungiselele yokuthi uma uthatha lolu upholi ikhaya lakhe futhi iyoba elinye ilungu lomkhaya wakho, khona-ke une ukuchitha isikhathi esiningi ukuxhumana naye.
zopholi Afrika grey
Ingqondo nangemicabango ngokomzwelo zopholi grey zivame kuqhathaniswa ne ingqondo yengane engu-5 ubudala. Lezi zinyoni ngakho smart ukuthi abanikazi abaningi zopholi Afrika grey kufanele njalo ucabange indlela nokuthi yini ongaba nentshisekelo. Kubalulekile ngazo zonke izindlela ukuze ondle ubuchopho bazo.
Abanye basibiza ngokuthi lezi zopholi boring. Kuyaziwa ukuthi izinyoni zasendle ukuhlafuna izinkuni izihlahla ukuze azakhele indlu. They hamba endlini zingagadiwe, zopholi Afrika grey ubuyele kuleli ukuziphatha isegazini futhi baqala ukuhlafuna into ingena indlela yabo.
Lena enye yezinhlobo ezingu zabakhuluma best wonke umndeni zopholi. Sinenkosi eziningi namanye amakhono, ngaphezu ukuthi basuke kakhulu okukhulunywa kahle ngazo. Lezi zinyoni cute zihlale ajabule futhi yilokho okumele ngokwayo zabanikazi abafanele.
Noma ubani ecabanga "wokutholwa" we upholi kufanele wazi ukuthi lezi zinyoni angaphila iminyaka engaphezu kuka-70, kodwa lokhu kwenzeka, uma azishiye uyoboniswa kahle zinakekelwe.
cockatoo Ubumpunga onesiqhova
Lovely futhi eyingqayizivele cockatoo - inyoni enkulu. Kunezinhlobo ezimbili ezidumile cockatoos ukuthi kukhona letingemasayizi lahlukene. Upholi omude kunayo yonke, kukalwa kusukela uqhwaku kuya yomsila yakhe izimpaphe, ifinyelela ubude ngamasentimitha angaba ngu-60, kuyilapho kulencane cockatoo onesiqhova - amasentimitha angaba ngu-30. Kodwa uma kungenjalo ayefana kakhulu.
Njengazo zonke izinyoni omkhaya, grey upholi onesiqhova kuyinto obathandayo kakhulu. Nsuku zonke, abanikazi lezi zinyoni kufanele ichitha isikhathi esiningi nabangane babo enezimpiko kukhona izingxoxo ezibalulekile nalabo okhuluma ikakhulukazi, zokuxhumana (i zopholi ukucabanga umnikazi wabo - engumngane wabo iphakethe).
upholi Noble noma eklektus
upholi enhle kakhulu ukuthi ngeke abashiye ubani ongumthandi sokunganaki izinyoni. Lezi zopholi abizwa ngokuthi zinhlobo dimorphic, kusukela kwabesilisa nabesifazane kukhona izimpaphe ezahlukene kakhulu. Umbala abesilisa luhlaza okotshani, kanti izinsikazi - abomvu amnyama ne sheen bluish-purple phezu kwesifuba nasesiswini.
Kukhona futhi zenyathi ezintathu ezingafani ezisetshenziswa yila zopholi ezihloniphekayo, okuyinto enhle nakakhulu. Njengezinye izinhlobo eziningi izinyoni ezinkulu, eklektusy - eyikhulu.
Kungani amahlamvu kwesihlahla se-okhi ziwuphawu impilo, ubude besikhathi nobuhlakani bezempi?
Amathiphu ambalwa sendlela ukulondoloza utamatisi fresh isikhathi eside